Dadku Waxay Dardar Gelinayaan Xilliga Faafida oo leh Hal -abuurnimo Naxdin leh
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Dadku Waxay Dardar Gelinayaan Xilliga Faafida oo leh Hal -abuurnimo Naxdin leh
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Bill Gates ayaa fariin u haya dunida.
Xog cusub ayaa daaha ka rogtay in dunidu ay kor u kacday si looga hortago in xaaladaha ugu xun ay dhacaan; Iftiimintu waxay u baahan tahay maalgelin muddo dheer ah si loo hubiyo soo kabasho loo siman yahay iyo horumar joogto ah oo ku wajahan Yoolalka Caalamiga ah, oo loo yaqaan Himilooyinka Horumarinta Joogtada ah ee Qaramada Midoobay.
Bill & Melinda Gates Foundation ayaa maanta bilaabay warbixinteedii shanaad ee goolhayeyaasha, taas oo muujineysa xog -ururin caalami ah oo la cusbooneysiiyay oo muujineysa saameynta xun ee masiibada ku aaddan horumarka laga gaaray Yoolalka Horumarinta Joogtada ah ee Qaramada Midoobay (Hadafyada Caalamiga ah).
Warbixinta sannadkan, oo ay si wadajir ah u qoreen Bill Gates iyo Melinda French Gates, oo ah guddoomiyeyaasha Bill & Melinda Gates Foundation, ayaa muujinaya in farqiga u dhexeeya COVID-19 uu weli taagan yahay, iyo kuwa sida aadka ah ugu dhacay masiibada ugu gaabis ah inuu bogsado.
Sababtoo ah COVID-19, 31 milyan oo qof oo dheeri ah ayaa lagu riixay saboolnimo ba'an sanadka 2020 marka la barbar dhigo 2019. In kasta oo 90% dhaqaalahoodii horumaray ay dib u soo ceshanayaan heerka dakhli ee qofkiiba sanadka soo socda, kaliya seddex meelood meel hoose iyo dhexe -Dhaqaalaha soo gala ayaa laga filayaa inay sidaas sameeyaan.
Nasiib wanaag, intii burburkaan ku jiray, dunidu waxay u istaagtay inay ka hortagto qaar ka mid ah xaaladaha ugu xun. Warbixintii Gool -hayeyaasha sannadkii hore, Machadka Cabbiraadaha Caafimaadka iyo Qiimeynta (IHME) ayaa saadaaliyay hoos u dhac 14 boqolkiiba ah oo ku jira daboolidda tallaalka adduunka - si wax ku ool ah u tirtirto 25 sano oo horumar ah 25 toddobaad gudahood. Falanqaynta cusub ee IHME waxay muujineysaa in hoos u dhaca, iyadoo aan weli la aqbali karin, uu ahaa kala bar wixii la filayay.
Warbixinta, wada-guddoomiyayaashu waxay iftiiminayaan “hal-abuurnimada cajiibka ah” ee suurta gal ahayd oo keliya sababtoo ah iskaashiga caalamiga ah, ballanqaadka, iyo maalgelinta muddo tobanaan sano ah. Waxay qirayaan in ka hortagga xaaladaha ugu xun ay tahay wax lagu ammaano, haddana waxay ogaadaan inaysan ku filnayn. Si loo hubiyo in si dhab ah looga soo kabsado masiibada, waxay ku baaqayaan maalgelin muddo dheer ah xagga caafimaadka iyo dhaqaalaha-sida kuwii horseeday horumarka degdegga ah ee tallaalka COVID-19-si loo xoojiyo dadaallada soo kabashada oo adduunka dib loogu soo celiyo la kulma Yoolalka Caalamiga ah.
“[Sannadkii la soo dhaafay] wuxuu xoojiyay aaminsanaantayada ah in horumarku suurogal yahay laakiin aan laga fursan karin,” qor guddoomiyeyaasha. "Haddii aan ku ballaarin karno sida ugu wanaagsan ee aan aragnay 18 -kii bilood ee la soo dhaafay, waxaan ugu dambeyntii dib u dhigi karnaa masiibada oo aan mar kale dardargelinnaa horumarka wax ka qabashada arrimaha aasaasiga ah sida caafimaadka, gaajada, iyo isbeddelka cimilada."
Warbixintu waxay iftiiminaysaa saamaynta dhaqaale ee aan habboonayn ee masiibadu ku yeelatay haweenka caalamka. Wadammada dhaqaalahoodu sarreeyo iyo kuwa hooseeyaba si isku mid ah, haweenka ayaa si aad ah ugu dhuftay hoos-u-dhaca dhaqaale ee adduunka oo uu sababay masiibada.
Melinda French Gates ayaa tiri "Dumarku waxay la kulmaan caqabado qaab dhismeed meel kasta oo adduunka ah, taasoo ka dhigaysa inay aad ugu nugul yihiin saameynta masiibada." “Maalgelinta haweenka hadda iyo wax ka qabashada sinnaan -darradaas, dawladuhu waxay kicin karaan soo kabasho loo siman yahay iyagoo xoojinaya dhaqaalahooda ka dhanka ah dhibaatooyinka mustaqbalka. Kaliya maahan wax sax ah - laakiin siyaasad caqli leh oo qof walba anfici doonta. ”
Warbixinta ayaa sidoo kale muujineysa sida waxa loogu yeero "mucjisada" ee tallaallada COVID-19 ay ka dhalatay tobanaan sano oo maalgashi, siyaasado, iyo iskaashiyo aasaasay kaabayaasha, kartida, iyo nidaamyada deegaanka ee lagama maarmaanka u ah in si dhaqso leh loo geeyo. Si kastaba ha noqotee, nidaamyada u oggolaaday horumarka aan horay loo arag iyo keenista tallaalka COVID-19 ayaa ugu horreyn ka jira waddamada hodanka ah, taas darteedna, dunidu si siman ugama faa'iidaysan.
“Maqnaanshaha si siman loo helo tallaallada COVID-19 waa masiibo caafimaad oo dadweyne,” ayuu yiri Bill Gates. “Waxaan wajahaynaa halista dhabta ah ee ah in mustaqbalka, waddamada iyo bulshooyinka hodanka ah ay bilaabi doonaan daweynta COVID-19 oo ah cudur kale oo saboolnimo ah. Dib uma dhigi karno masiibada ilaa qof walba, iyadoon loo eegayn meesha uu ku nool yahay, uu helayo tallaallo. ”
In ka badan 80% dhammaan tallaalada COVID-19 ayaa laga maamulay waddammada dakhligoodu sarreeyo iyo kuwa dhexe-dhexe ilaa maanta, iyadoo qaarkood ay sugeen laba illaa saddex jeer tirada loo baahan yahay si ay u daboolaan dhiirrigeliyeyaasha; wax ka yar 1% qiyaasta ayaa laga maamulay waddamada dakhligoodu hooseeyo. Dheeraad ah, helitaanka tallaalka COVID-19 ayaa si aad ah loola xiriiriyay meelaha ay ku yaalliin tallaalka R&D iyo awoodda wax-soo-saarka. In kasta oo Afrika hoy u tahay 17% dadweynaha adduunka, tusaale ahaan, waxay leedahay wax ka yar 1% awoodda wax -soo -saarka tallaalka ee adduunka.
Ugu dambayntii, warbixintu waxay ku baaqaysaa in adduunku maalgashi ku sameeyo R&D, kaabayaasha dhaqaalaha, iyo hal -abuurka meelaha u dhow dadka u istaaga inay ka faa'iidaystaan.
"Waa inaan maal-gelinno la-hawlgalayaasha maxalliga ah si aan u xoojinno awoodda cilmi-baarayaasha iyo soo-saareyaasha waddamada dakhligoodu hooseeyo si loo abuuro tallaallada iyo daawooyinka ay u baahan yihiin," ayuu yiri Madaxa Gates Foundation Mark Suzman. “Sida kaliya ee aan ku xallin karno caqabadahayaga caafimaad ee ugu weyn waa innagoo ka faa’ideysaneyna hal -abuurka iyo kartida dadka adduunka oo idil.
Siyaabo badan, masiibada ayaa tijaabisay rajadayada. Laakiin ma aysan burburin.
Duruufaha ugu adag ee la malayn karo, waxaan aragnay hal -abuurnimo cajiib ah.
Waxaan aragnay sida ugu dhaqsaha badan ee aan u beddeli karno hab -dhaqankeenna, shaqsi ahaan iyo bulsho ahaanba, marka duruuftu u baahan tahay.
Maantana, waxaan sidoo kale soo sheegi karnaa in dadka meel kasta oo adduunka ka mid ah ay u tallaabsadeen sidii loo ilaalin lahaa horumarka horumarineed ee aan samaynay muddo tobanaan sano ah-marka ay timaaddo SDGs, ugu yaraan, saameynta masiibada COVID-19 ee socota aad bay uga sii xumaan lahayd.
Waxay ahayd sannad xoojisay aaminsanaantayada ah in horumar la gaari karo laakiin aan laga maarmi karin. Dadaalka aan galnay wax weyn baa ka jira. Iyo, haddaan nahay rajo -yari aan samir lahayn, waxaan aaminsanahay inaan bilaabi karno inaan wax ka baranno guulaha iyo guul darrooyinka masiibada illaa hadda. Haddii aan ku ballaarin karno sida ugu wanaagsan ee aan aragnay 18 -kii bilood ee la soo dhaafay, waxaan aakhirka dib u dhigi karnaa masiibada oo aan mar kale dardargelinnaa horumarka wax ka qabashada arrimaha aasaasiga ah sida caafimaadka, gaajada, iyo isbeddelka cimilada.
Maxay yihiin qaar ka mid ah xalalka caawiya tartanka loogu jiro soo afjaridda masiibada? Daawo Bill Gates iyo saddex goolhaye ayaa iftiiminaya aaladaha loo isticmaalo la dagaalanka COVID.
Xogtu Waxay Sheegaysaa Sheeko La Yaab Leh
Sanadkii la soo dhaafay, waxay ahayd wax aan suurtogal ahayn in la iska indho tiro farqiga u dhexeeya ma aha oo kaliya qofka xanuunsaday iyo kan dhintay - laakiin sidoo kale kii ahaa inuu shaqo tago, yaa ka shaqayn kara guriga, iyo kuwa shaqadooda gebi ahaanba waayey. Sinnaan -darrooyinka caafimaadku waa kuwo duug ah sida nidaamyada caafimaadka laftooda, laakiin waxay qaadatay masiibo caalami ah si ay si xoog leh u xusuusiso adduunka cawaaqibkooda.
Malaayiin Dheeraad ah oo ku jira Saboolnimo Ba'an
Dad badan, saamaynta dhaqaale ee masiibada ayaa ah mid daran oo waarta. Waan ognahay inaan u muuqan karno inay yihiin malaa'igo aan laga fileynin mowduucan - waxaan nahay laba ka mid ah dadka ugu nasiibka badan meeraha. Oo masiibada ayaa taas sii cadaysay. Dadka sidayada oo kale ah ayaa si wanaagsan ugu dulqaatay masiibada, halka kuwa ugu nugul ay sida ugu daran u dhacday oo ay u badan tahay inay noqdaan kuwa ugu gaabiya soo kabashada. 31 milyan oo dheeri ah oo adduunka oo dhan ah ayaa loo riixay saboolnimo aad u daran COVID-19 awgeed. In kasta oo raggu ay 70% u badan tahay inay u dhintaan COVID-19, haddana haweenku waxay weli si aan kala sooc lahayn u saameeyeen saamaynta dhaqaale iyo bulsheed ee masiibada: Sannadkan, shaqaalaynta haweenka adduunka oo dhan ayaa la filayaa inay sii ahaato 13 milyan oo shaqo oo ka hooseysa heerka 2019-halka ragga shaqaalaynta ayaa inta badan la filayaa inay ka soo kaban doonto sicirrada aafada ka hor.
In kasta oo noocyada kaladuwan ay ku hanjabaan inay wiiqi doonaan horumarka aan samaynay, haddana qaar ka mid ah dhaqaaluhu waxay bilaabayaan inay soo kabtaan, iyagoo keenaya dib -u -furidda ganacsiga iyo shaqo -abuurka. Laakiin soo -kabashadu waa mid aan sinnayn inta u dhaxaysa — iyo xataa gudaha- waddammada. Sannadka soo socda, tusaale ahaan, 90% dhaqaalaha horumaray ayaa la filayaa inay dib u soo ceshadaan heerarka dakhliga qofkiiba, halka saddex meelood meel kaliya dhaqaalaha dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhexe la filayo inay sidaas oo kale sameeyaan. Dadaallada yareynta saboolnimada ayaa istaagaya- taasina waxay ka dhigan tahay ku dhawaad ​​700 milyan oo qof, oo u badan waddamada dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah, ayaa la saadaalinayaa inay ku sii jiri doonaan saboolnimada ba'an 2030-ka.
Nusqaamaha Koraaya ee Waxbarashada
Waxaan aragnaa sheeko la mid ah marka ay timaaddo waxbarashada. Kahor masiibada, sagaal ka mid ah 10-kii carruur ah ee ku nool dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo ayaa awoodi waayay inay wax akhriyaan oo fahmaan qoraalka aasaasiga ah, marka la barbar dhigo mid ka mid ah 10-kii carruur ah ee ku nool dalalka dhaqaalahoodu sarreeyo.
Caddaynta hore waxay soo jeedinaysaa in khasaaraha waxbarasho uu ugu weyn yahay kooxaha la hayb sooco. Kala duwanaanshaha waxbarasho ee sii kordhaya ayaa laga helay dalalka hodanka ah, sidoo kale. Waddanka Maraykanka, tusaale ahaan, luminta barashada ee ardayda fasalka saddexaad ee Madow iyo Laatiin waxay celcelis ahaan labanlaabmeen ardayda caddaanka iyo Aasiya Ameerikaanka ah. Iyo lumitaanka barashada ee ardayda fasalka saddexaad ee dugsiyada saboolnimada sare waxay saddex jibaarantay kuwa dhiggooda ah ee ku jira dugsiyada saboolnimada hoose.
Carruur Badan oo Tallaaladu Maqan yihiin
Dhanka kale, heerarka tallaalka carruurnimada caadiga ah ee caalamiga ah ayaa hoos ugu dhacay heerarkii ugu dambeeyay ee la arko 2005. Intii u dhaxaysay bilowgii masiibada iyo markii adeegyada caafimaadku bilaabeen inay soo kabsadaan qeybtii labaad ee 2020, in ka badan 30 milyan oo carruur ah oo adduunka ku nool ayaa seegay tallaalkooda - taasi waa 10 milyan sii badan sababtoo ah masiibada. Waxaa suurtogal ah in qaar badan oo ka mid ah carruurtan aysan waligood qaadan doonin qiyaaso.
Laakiin halkaan, xogta ayaa naga yaabisay: Sannad ka hor, waxaan soo sheegnay in Machadka Cabbiraadaha Caafimaadka iyo Qiimeynta uu qiyaasayay in daboolidda tallaalku ay hoos u dhici doonto 14 dhibcood adduunka oo dhan sanadka 2020, taas oo noqon lahayd 25 sano oo horumar ah oo hoos u dhacaysay. Laakiin iyada oo ku saleysan xog dhowaan la soo dhaafay, waxay umuuqataa hoos -u -dhaca dhabta ah ee daboolidda tallaalka - in kasta oo ay ahayd baaba 'in ay ahayd kala bar uun.
Dadka Dardar Gelinaya
Intii aan sii wadnay kala-shaandhaynta xogta, waxay caddaatay in tani aysan ahayn mid is-beddel ah: Tilmaamayaal badan oo horumarineed oo muhiim ah, dunidu waxay kor u kacday sannadkii la soo dhaafay si ay uga hortagto qaar ka mid ah xaaladaha ugu xun.
Qaado duumada, tusaale ahaan, oo muddo dheer ka mid ahayd cudurrada dunida ugu sinnaanta daran: 90% kiisaska duumada waxaa laga helaa Afrika. Sanadkii la soo dhaafay, Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu saadaaliyay carqalado daran oo ku aaddan dadaallada ka hortagga duumada ee lagama maarmaanka u ah oo dib u dhigi kara horumarka 10 sano - oo ay ka dhalan karto 200,000 oo dheeraad ah oo u dhinta cudur laga hortagi karo. Saadaashaasi waxay dalal badan ku dhiirrigelisay inay tallaabo qaadaan si loo hubiyo in shabagyada sariirta la qaybiyo oo tijaabooyinka iyo dawooyinka ka hortagga cudurrada ay weli diyaar yihiin. Benin, halkaas oo duumadu ay tahay sababta ugu horreysa ee dhimashada, xitaa waxay heshay hab lagu hal-abuuri karo masiibada dhexdeeda: Waxay abuureen nidaam cusub oo digitized ah oo loogu talagalay shabakadaha sariirta lagu daweeyo cayayaanka, iyagoo helaya 7.6 milyan oo shabagyo ah guryaha dalka oo dhan 20 maalmood.
Cotonou, Benin Sawirka waxaa iska leh Yanick Folly/AFP iyada oo loo sii marayo Getty Images
Waxay mudan yihiin mahadnaqa adduunka.
Dabcan, baaxadda buuxda ee saamaynta masiibadu ku yeelatay SDGs waxay qaadan doontaa sannado in si buuxda loo fahmo, maadaama xog badan oo ka sii wanaagsan la helayo. Xogtanina ma yareyneyso dhibaatada dhabta ah ee masiibada u geysatay dadka meel kasta - aad uga fog. Laakiin xaqiiqda ah inaan tilmaami karno astaamaha togan iyadoo ay jirto masiibo caalami ah oo hal-jiil ah ayaa ah wax aan caadi ahayn. Iyagoo hal gacan dhabarka ka xirtay, shaqsiyaad aan tiro lahayn, ururo, iyo dalal ayaa kor u dhaafayay hal -abuurka, la -qabsiga, iyo dhisidda nidaamyo adkeysi leh, taasna, waxay mudan yihiin mahadcelinta adduunka.